Sheekh Abuu Muscab "61 Askari Ayaan ku Dilnay Weerarkii Af-urur Gaadiid Dagaalna Waa Qaniimeysanay" Dhageyso.
Thursday June 08, 2017 - 12:42:01 in Wararka by Super Admin
Kadib dagaal culus oo saaka aroortii ka bilaawday duleeka magaalada Boosaaso ayay ciidamada Xarakada Al Shabaab ugu suurtagashay in ay la wareegaan gacan ku heynta deegaan istiraatiiji ah iyo saldhig melleteri.
Wararka ka imaanaya gobolka Bari waxay sheegayaan in ciidamo aad u hubeysan oo Katirsan Xarakada SHM ay saaka aroortii weerar xoog kugal ah ku qaadeen saldhig ciidan oo maleeshiyaadka maamulka ‘Puntland’ ku leeyihiin deegaanka Af-urur ee duleedka Boosaaso.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay xaqiijinayaan in gabi ahaanba deegaankii lagu dagaallamay ay si buuxda ula wareegeen ciidamada Mujaahidiinta.
Afhayeenka Ciidamada Al Shabaab Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab ayaa idaacadda Andalus u sheegay in dagaalka ay ku dileen 61 Askari islamarkaana ay ku qabsadeen 16 gaari oo 9 kamid ah yihiin gaadiidka dagaalka ee Tikinikada loo yaqaan.
Warar lagu kalsoonyahay waxay xaqiijinayaan in dagaalkii saaka lagu dilay Jeneraal Sangal Taliyihii guutada ciidanka Af-urur iyo Taliye Cabdi Biriq oo kamid ahaa saraakiisha ugu sarraysa ciidanka Daraawiishta Puntland.
Waa Weerarkii ugu xooganaa uguna khasaaraha badnaa ee Abid ciidamada Maamulka 'Puntland' isku magacaabo mar qura uu kala kulmo Xarakada Shabaabul Mujaahidiin marka loo eego weeraradii horay uga dhici jiray gobollada Bari iyo Mudug oo uu awood ku leeyahay Maamulka Cabdi Wali Gaas.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Sh.Abuu Muscab MP3